१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपाली महिला भलिबल टिमले ऐतिहासिक पदक जित्ने पक्का भएको छ। शनिबार त्रिपुरेश्वरस्थित कबर्डहलमा भएको सेमिफाइनलमा श्रीलंकालाई ३-० को सोझो सेटमा पराजित गरेपछि नेपाल फाइनल पुगेको हो। सागमा नेपाली महिला भलिबलमा फाइनलमा पुगेको यो पहिलो पटक हो। नेपालले पहिलो सेट २५-१४ ले सहज रुपमा जितेको थियो। दोस्रो सेटमा पनि नेपाल खेलमा हाबी भयो। दोस्रो सेटमा नेपाल २५-१८ ले विजयी भयो। तेस्रो सेट भने प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो। नेपालले तेस्रो सेट २५-२१ ले जित्दै फाइनलमा स्थान पक्का गर्‍यो। अब नेपालले स्वर्णका लागि सोमबार भारतसँग खेल्नेछ। हार बेहोरेको अवस्थामा पनि नेपालले जितेको रजत ऐतिहासिक हुनेछ। यद्यपी नेपाली महिला भलिबल टिम सागमा पदकबिहीन बन्न परेको छैन। सागमा सहभागी भएका तीन संस्करणमै नेपालले कास्य पदक जितेको थियो। यसअघि सागमा नेपाली महिला भलिबलले कास्य पदक मात्र जितेको थियो। सन् २०१६ मा भारतमा भएको १२औं सागमा नेपालले कास्य जितेको थियो। त्यसैगरी सन् १९९९ र २००६ को सागमा पनि नेपालले कास्य पदक हात पारेको थियो। भारत पनि आजै भएको सेमिफाइनलमा माल्दिभ्सलाई
तीनै तहका रिक्त पदमा शनिबार भएको मतदानमा ६५.४३ प्रतिशत मत खसेको छ। रौतहट र हुम्लामा ८५ प्रतिशत मत खसेको छ भने रोल्पा थवाङमा वडाध्यक्षका लागि भएको मतदानमा १६.४ प्रतिशत मात्रै मत खसेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले शनिबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपनिर्वाचनमा मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको दाबी गरे। ‘मतदाताको व्यापक उत्साहपूर्ण सहभागिता रह्यो,’ उनले भने। मतदानका क्रममा कास्की, लम्जुङलगायत ठाउँमा बम विस्फोट भए पनि खासै असर नपरेको उनले बताए। आयोगले मतदाता परिचय पत्र नभए पनि अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदातालाई नागरिकता वा राहदानीलगायत परिचय पत्रबाट पनि मतदान गर्न दिएको थियो। तीनै तहका रिक्त पदका लागि चार लाख ५४ हजार मतदाता थिए। तीमध्ये दुई लाख ९७ हजार मत खसेको छ। ‘७० प्रतिशत मत खस्छ भन्ने आँकलन थियो,’ उनले भने। संघीय निर्वाचन क्षेत्र सदस्यका लागि कास्की २ मा भएको उपनिर्वाचनमा ६५ प्रतिशत मत खसेको आयोगको भनाइ छ। यहाँ २०७४ सालमा खसेकोभन्दा कम मत खसेको छ। कास्की २ मा ४६ हजार पाँच सय मत खसेको हो। यस्तै भक्तपुरमा ७० प्रतिशत, दाङमा ६७
झिसमिसेमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा एउटा ट्रक विस्तारै आइरहेको थियो। चराचुरुंगी चिरविर गर्न थाल्दा मेरो पनि दिन सुरू हुन्छ। अनि रेडियोमा समाचार भन्न म स्कुटी लिएर निस्किन्छु। बिहानमा घटनाहरू तीव्र हुन्नन्, समाचार पनि! त्यो ट्रकले भने मेरा लागि समाचार लिएर आएको थियो जसलाई मैले कहिल्यै लेखिनँ। अचानक ट्रकको बायाँतर्फको ढोका खुल्यो। खुलेको ढोकाबाट ड्राइभरले एक महिलालाई बाहिर धकेल्न खोजिरहेका थिए। महिला हुत्तिनबाट जोगिन्। यो दृष्य मेरो आँखैअघि एक्कासी परेको थियो। मैले आफ्नो गति घटाएँ। ट्रकको पनि गति कम भइरहेको थियो। म ट्रकको अझ नजिकै पुग्दासम्म ती महिला ट्रकबाट पछारिइन्। ढोका ढ्याम्म लाग्यो र ट्रक हुँइकियो। म आफैं अतालिएँ। दिनहुँ बलात्कारका घटनाका समाचार पढिरहेकी हुन्छु। यी युवती पनि त्यस्तै घटनाको सिकार त होइनन्? डराउँदै उनको नजिक गएँ। भुइँबाट उनी सिधै उठिन् मानौं उनी यसरी पछारिएर उठ्न बानी परेकी छन्। मलाई भने सास आयो, धन्न केही भएको रहेनछ। उसको अनुहारभरि चोट थियो। शरीरमा लगाएका कपडा च्यातिएका थिए। त्यो ट्रकमा भएका मानिसले युवतीको बलात्कार गरेको मेरो अनुमान पक
आइतबार दशरथ रंगशालामा उद्घाटन हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा भारोत्तोलन खेलाडी कमलबहादुर अधिकारीले बोक्ने भएका छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले कमलले झण्डा बोक्ने जनाएको हो। यसअघि १३औं सागको प्राविधिक समितिले भने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काको नाम सिफारिस गरेको थियो। क्रिकेट ‌ओलम्पिक खेल नभएकाले पारसको सट्टामा कमलको नाम पक्का गरिएको हो। काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म हुने उक्त प्रतियोगिताको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आइतबार दशरथ रंगशालामा एक विशेष समारोहबीच उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। दशौं सागका स्वर्ण विजेता कमलले दोस्रो पटक साग खेल्न लागेका हुन्। यसअघि कमलले सन् २०१८ मा इन्डोनेसियामा भएको एसियाली खेलकुदमा पनि नेपालको झन्डा बोकेका थिए। सन् २००६ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको दसौं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्णपदक हासिल गर्दै उनले सनसनी मच्चाएका थिए। नेपाली सेनाका कमलले ६९ केजी तौल समूहमा नेपालका लागि पहिलो स्वर्ण जितेका थिए, साग गेम्सकै इतिहासमा। त्यसयता उनले ओलम्पिकमा पनि भाग लिए। स
दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपाली फुटबल टिमको प्रदर्शन गर्व गर्न लायक छ। नेपालले १२ संस्करणमध्ये ५ संस्करणमा फाइनलमा स्थान बनाएको छ। ५ मध्ये नेपालले ३ पटक स्वर्ण चुमेको छ। सन् १९९४ को पहिलो संस्करणमा स्वर्ण जितेको नेपाली फुटबल टिमले १९९३ मा पनि पहिलो स्थान हात पारेको थियो। सन् २०१६ मा भारतमा भएको १२ औं सागमा नेपालले घरेलु टिम भारतलाई फाइनलमा हराएर साग फुटबलमा २३ वर्षपछि स्वर्ण जितेको थियो। नेपाल १९८७ र १९९९ मा भने फाइनलमा पराजित भएको थियो। सागमा जितेका ३ स्वर्णमध्ये नेपाली राष्ट्रिय टिमले २ र यु–२३ टिमले एक स्वर्ण जितेका छन्। सन् २००४ मा पाकिस्तानमा भएको नवौं सागदेखि फुटबलमा यु–२३ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको थियो। घरेलु मैदानमा आइतबारदेखि सुरू हुने १३ औं सागमा नेपालले लगातार दोस्रो स्वर्ण जित्ने लक्ष्य बनाएको छ। जसका लागि नेपाली टिमले चार महिनादेखि तयार गरिरहेको छ। तयारीका क्रममा नेपालले म्यानमारको यु–२३ टिमसँग अभ्यास खेल खेलेको थियो। जुन खेल २–२ को बराबरीमा सकिएको थियो। यु–२३ टिममा रहेका खेलाडी सिनियर टिममा पनि रहेकाले त्यसको फाइदा हुने प्रशिक्षक बालगोपाल महर
एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि अस्पतालमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वेवसाइटबाटै स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिन सकिने भएको छ। केपी शर्मा ओली डटकमडटएनपीमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिन मिल्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले धेरैले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे चासो राखेको र भेट्न चाहेकोले वेवसाइटबाट आफ्ना भावना प्रकट गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। ‘धेरै महानुभावहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चासो राख्नु भएको छ। भेटेरै शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहनुभएको छ। तसर्थ शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहनेहरूले आफ्नो भावना kpsharmaoli.com.np मा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ,’ रिमालले ट्वीट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीटरमार्फत् स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिनेहरूलाई गत बिहीबार धन्यवाद दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको गत मंगलबार महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई अझै केही दिन चिकित्सकह
तीन तहका रिक्त पदका लागि शनिबार मतदान भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको रिक्त ५२ पदको उपनिर्वाचनका बिहान सात बजेदेखि मतदान जारी छ। बेलुकी ५ बजेसम्म मतदानका लागि समय दिइएको छ। प्रतिनिधिसभातर्फ २१, प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ४३ र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि २७३ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उपनिर्वाचनमा ४ लाख ५४ हजार ११४ जनालाई मतदान गर्न पाउने मताधिकार छ। कास्की–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, भक्तपुर, बागलुङ र दाङमा प्रदेशसभा सदस्य तथा धरानमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। कास्की २ का उम्मेदवार नेकपाकी तर्फबाट विद्या भट्टराई र विवेकशील साझाकी उम्मेदवार रजनी केसीले मतदान गरिसकेका छन्। त्यस्तै, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ। हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। हेर्नुस् तस्बिरहरू: तस्बिरहरू : निशा भण्डारी र रासस
तीन तहका रिक्त पदका लागि शनिबार मतदान भइराखेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको रिक्त ५२ पदको उपनिर्वाचनका बिहान सात बजेदेखि मतदान जारी छ। बेलुकी ५ बजेसम्म मतदानका लागि समय दिइएको छ। प्रतिनिधिसभातर्फ २१, प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ४३ र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि २७३ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उपनिर्वाचनमा ४ लाख ५४ हजार ११४ जनालाई मतदान गर्न पाउने मताधिकार छ। कास्की–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, भक्तपुर, बागलुङ र दाङमा प्रदेशसभा सदस्य तथा धरानमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ। हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि शनिबार कास्की -२ मा मतदान शुरु भइरहँदा तीन ठाउँमा बम बिष्फोट भएको छ। पोखरा ९ नयाँबजारस्थित नवप्रभात मावि मतदान केन्द्रभित्रै बम बिष्फोट भएको हो। बिष्फोट हुँदा केही बेर मतदान रोकिए पनि अहिले सुरू भइसकेको छ। पोखरा १६ अर्मला र वडा नं. ३३ को सरस्वती मावि मतदान केन्द्र नजिकै बम विष्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। बम विष्फोट भए पनि मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ। बम बिष्फोट भएको स्थानमा पनि अहिले भने मतदान शान्तिपूर्ण रुपमा चलिरहेको छ। मतदान केन्द्रमा मतदाताको भीड बढ्ने क्रम बढेको छ। विहान ७ बजेदेखि शुरु भएको मतदान हुने क्षेत्रभरी सवारी साधन आवत– जावतमा रोक लगाइएको छ । पोखरा महानगरको ११ वटा वडा कास्की २ मा पर्छ। यो क्षेत्रका ७१ हजार ८ सय ७१ जना मतदाता छन्। पोखरा महानगरको ११ वटा वडा रहेको यो क्षेत्रबाट ११ वटा दलीय उम्मेदवार र १० जना स्वतन्त्र गरी २१ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । जसमा नेकपाबाट विद्या भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसबाट खेमराज पौडेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोमबहादुर भण्डारी, संघीय समाजवादी पार्टीबाट धर्मर
प्रदेश १ ख निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगतको चाँगुनारायण नगरपालिका-२को दुवाकोट मतदानकेन्द्रमा मतदान गर्दै एक वृद्ध। फोटोः निशा भण्डारी प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको रिक्त ५२ पदको उपनिर्वाचनका लागि शनिबार बिहान सात बजेदेखि मतदान शुरु भएको छ । मतदानका लागि सम्पूर्ण आवश्यक तयारी पूरा भएको र भरपर्दो व्यवस्था मिलाइएको हुँदा कुनै शङ्का, डर र त्रासमा नपरी निर्धक्क भएर मतदानमा सरिक हुन सम्पूर्ण मतदातालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आह्वान गरेका छन्। उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै सुरक्षा निकायको समन्वय र सहभागितामा उपनिर्वाचन लक्षित भरपर्दो एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइएको छ। प्रतिनिधिसभातर्फ २१, प्रदेशसभा सदस्य तर्फ ४३ र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि २७३ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यस उपनिर्वाचनमा ४ लाख ५४ हजार ११४ जनालाई मतदान गर्न पाउने मताधिकार छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त वा बिरामी मतदातालाई प्राथमिकता दिई मतदान गर्न पाउने उचित प्रबन्ध मिलाउन पनि
मिर्गौला हाम्रो शरीरको निष्कासन प्रणालीसँग सम्बन्धित अंग हो। यसले शरीरका विकारयुक्त कुरा फाल्ने, पानीको सन्तुलन मिलाउने, रातो रक्तकोष बनाउन चाहिने हर्मन उत्पादन गर्ने, ग्लुकोजको व्यवस्थापन गर्नेलगायत काम गर्छ। यो एकदमै महत्वपूर्ण अंग हो। भगवानले हरेक मानिसलाई जन्मजात दुइटा मिर्गौला दिनुभएको हुन्छ।यिनीहरू पेटको पछाडिको भागमा हुन्छन्। मिर्गौला सिमी आकारका हुन्छन्। मिर्गौलाको रोग कसरी लाग्छ ? कतिपय अवस्थामा मिर्गौलाका रोग जन्मजात हुन्छ। कोही उमेर बढ्दै जाँदा रोगी हुन्छन्। बच्चाहरूमा जन्मजात रूपमा एउटामात्रै मिर्गौला हुने, मिर्गौलाको रगतको नशा च्यापिएको वा बिग्रिएको हुने, मिर्गौलामा सिस्ट बन्नेलगायतका समस्या देखिन्छन्। पिसाब उम्लिएर गएर संक्रमण गराउने,पिसाबको थैली र नलीका रोगले पनि बच्चाको किड्नीलाई असर गरिरहेको हुन्छ। वयष्क मान्छेमा मिर्गौलाको समस्या हुनुका प्रमुख दुई कारण उच्च रक्तचाप र मधुमेह हुन्। मिर्गौलामा रोग देखिने अन्य कारणमा मिर्गौलाको हुने पत्थरी, ट्युमर, मिर्गौलामा लाग्ने चोटपटकलगायत छन्। मिर्गौलालाई स्वस्थ कसरी राख्ने ? बेलाबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ।